Nnyefe ụgbọ ala Cummins nke mbụ nyere Penske Truck Leasing nke Hino Trucks mere ncheta
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Nnyefe ụgbọ ala Cummins nke mbụ nyere Penske Truck Leasing nke Hino Trucks mere ncheta
N'afọ gara aga, Hino kwupụtara ebumnobi ha imepụta ụgbọ ala Hino na-arụ ọrụ dị arọ na nke nwere igwe Cummins maka ọrịre na North America na njedebe nke 2021. N'ọnwa a, Hino nyefere ụgbọ ala mbụ ndị a n'aka Penske Truck Leasing na emume na Osisi ha na Mineral Wells, WV ka mmalite nke mmepụta na-agbago.
"Anyị meghere ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ ọhụrụ anyị na Mineral Wells afọ ole na ole gara aga iji kwado ụbara ọchịchọ na nhazi ngwaahịa. Taa, anyị na-enwe ike ịkwado ikike nrụpụta ọgbara ọhụrụ a ka ọ bụrụ ihe ọhụrụ ma gboo mkpa ndị ahịa anyị. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ nke mbụ n'ime ụdị ọhụrụ a na-aga na Penske Truck Leasing bụ onye ya na ya na-arụkọ ọrụ ogologo oge nke Hino Trucks. "Bob Petz, Sr. osote onye isi oche nke ụgbọ ala na azụmaahịa maka ụgbọ ala Hino kwuru.
Ndị otu Hino Trucks na Cummins nọ n'aka ka ha na-enye Paul Rosa, onye isi osote onye isi oche nke ịzụ ahịa na atụmatụ ụgbọ mmiri maka mgbazinye Penske Truck, jiri mkpịsị ugodi nke gwongworo nke mbụ.
"Anyị na Hino nwere mmekọrịta dị ogologo ma ha abụrụla ndị na-ebubata gwongworo dị elu n'ime ụgbọ ala anyị na-agbazinye ụgbọ ala na ụgbọ ala mgbazinye ihe karịrị afọ iri abụọ. Anyị na-atụ anya itinye ụgbọ ala ndị a n'ime ụgbọ mmiri anyị ma anyị na-aga n'ihu na-enwe ekele maka nkwado dị ịrịba ama Hino na-enye, "Rosa kwuru.
"Njikota ngwa ngwa nke Cummins B6.7 na L9 engines n'ime gwongworo Hino L & XL Series bụ ihe akaebe maka mgbanwe na mmekorita dị n'etiti otu anyị," Amy Boerger, Cummins' Vice President and General Manager, North America On Highway kwuru. "Anyị ga-amasị ikele Hino Trucks na mmalite mmepụta, yana Penske Truck Leasing na-enweta nke mbụ Hino L Series nke Cummins kwadoro."
Gọọmenti ebugara bụ 22MY L Series, kwadoro ya na injin Cummins B6.7 ma bụrụ akụkụ nke ahịrị Hino nke klaasị 6 & 7 gwongworo ochie nwere aha ụlọ ọrụ maka ịnye ọnụ ahịa kacha ala na klaasị ya yana nchekwa ọhụrụ. atụmatụ. Enyere Hino Trucks n'oge na-adịbeghị anya Price Digests ihe nrite uru echekwabara maka nnukwu ụgbọ ala Ọkara na-asọmpi nwere ụdị Cab & Chassis Conventional. Hino's L Series nwekwara sistemu nchekwa zuru oke gụnyere njikwa nkwụsi ike eletrọnịkị (ESC), Kọllision Mitigation System (CMS) Lane Departure Warning (LDW), Control Cruise Control (ACC) na eriri oche nke ọkwọ ụgbọ ala iji chebe ndị ahịa maịl maịl.